फेसबुक र ट्वीटर प्रतिबन्ध हुँदै छ ? यस्तो छ सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक – Clickmandu
फेसबुक र ट्वीटर प्रतिबन्ध हुँदै छ ? यस्तो छ सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक
क्लिकमान्डु २०७५ फागुन ५ गते १०:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । के फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा प्रतिबन्ध लाग्दैछ ? पछिल्लो समयमा नेपाली सामाजयमा यही विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । हरेक नागरिकले यही प्रश्न सोधीरहेका छन् ।
सरकार सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाबाट तर्सिएर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउन लागेको आशयका आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
तर सरकारले भने सामाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक विषयलाई बढवा दिएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई विधिमा ल्याउने प्रयास थालेको दावी गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले फेसबुक तथा ट्वीटर नेपालमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । दर्ता गर्न नआएमा ती सामािजक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा दर्ता भएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक रुपमा पचाउनसमेत मुस्किल पर्ने सूचना सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कलाकार र सामान्य नागरिकलाई समेत बेइज्जत गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ ।
कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर जथाभाबी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा विधेयकअनुसार कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट कान्छा… भन्ने गीतदेखि किन डरायो सरकार ?